Article | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More... | Page 10
Home >> Article (page 10)
राष्ट्रिय छवि बनाएका कलाकार प्रेम श्रेष्ठ
-गोविन्द अर्याल / नारायणगढ
चितवनको माटोमा कलाकारहरुको जन्म भएको र नेपालभरि नै चितवनका कलाकारहरु प्रख्यात रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यसै त, चितवनलाई देशको ७६औँ जिल्ला र वैकल्पिक राजधानीका रुपमा हेरिएको बेला चितवनको काखमा विभिन्न नाटक र डेढ दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमार्फत आफूलाई अब्बल कलाकारका रुपमा उभ्याउँदै आएका छन्, भनपा–१४ नारायणपुरका प्रेम श्रेष्ठ ।
सामान्य परिवारमा स्वर्गीय पिता÷माता जंगबहादुर श्रेष्ठ र राजकुमारी श्रेष्ठका जेष्ठ सुपुत्र प्रेम श्रेष्ठको जन्म २०२८ सालमा भएको थियो । आफ्नो जीवनको ५औँ वसन्तमा दौडँदै गर्दा आमाबुबा दुवैलाई गुमाएपछि श्रेष्ठ अभिभावकविहीन बने । आमाबुबाको मृत्युपछि उनलाई उनका हजुरबुबा स्व. श्रीप्रसाद श्रेष्ठले र उनका काकाकाकीले हेरचाह र पालनपोषण गरेका हुन् ।
श्रेष्ठ र उनका भाइलाई कहिल्यै पनि आमाबाबुको माया खड्किन दिएनन्, उनका काकाकाकी र हजुरबुबाले । ‘आफ्नै सन्तानसरह हाम्रो पालनपोषण गर्नुभयो । मलाई कहिल्यै पनि उहाँहरुले अर्काको सन्तान जस्तो सोच्नुभएन, जसले गर्दा म सानैदेखि आफ्नो काममा लगनशील भएर लाग्न पाएँ । उहाँहरुको प्रेरणाले नै म आज यहाँसम्म आइपुगेको हुँ’– श्रेष्ठ भन्छन् ।
उनी भन्छन्– ‘सानैदेखि ऐनाअगाडि बसेर अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्तीको अभिनय गर्दथेँ । उनीहरुले गरेको अभिनयजस्तै भयो कि भएन भनेर आफैँले आफैँलाई जाँच्दथेँ । ऐनाअगाडिबाट नै मेरो अभिनययात्रा सुरू भएको हो, उनी भन्दछन् । त्यसपछि स्कुलमा कक्षा ९ मा पढ्दापढ्दै २०४५ सालमा अर्जुन अस्तफलजीले लेख्नुभएको नाटक ‘नशाको दशा’ र ‘दाइजोबिनाको दम्पती’मा आफैँले निर्देशन गर्दै मुख्य भूमिकामा म नै रहेको थिएँ । उहाँको त्यो नाटक नै जीवनमा दर्शकको अगाडि मेरो पहिलो अभिनय थियो, जसलाई मैले कैलाशनगरमा मञ्चन गरेको थिएँ ।’
पहिलो नाटकबाट नै निर्देशन र अभिनयमा सफलताको स्वाद चाखेका उनले त्यसपछि अभिनयबाट नै आफ्नो करिअर बनाउनुपर्दछ भनेर अगाडि बढ्दै जाँदा सफलताको राम्रो स्वाद चाख्न सक्षम रहे ।
२०४७ सालमा एसएलसी पास गरेपछि आईए पढ्नका लागि भरतपुर हानिएका उनले आईए दोस्रो वर्ष पढ्दापढ्दै स्व. शिव रेग्मीसँग उनको भेट भयो । स्व. रेग्मीले मेरो अभिनय हेरिरहनुभएको रहेछ, तपाईंजस्तो मान्छे नारायणी कलामन्दिरलाई खाँचो छ भनेपछि २०४८ सालमा नारायणी कलामन्दिरसँग उनी आबद्ध भए, जहाँ अग्रजहरु प्रसाद श्रेष्ठ, ऋद्धिचरण श्रेष्ठजस्ता हस्तीसँग उनले काम गर्ने मौका पाए ।
जब उनी नारायणी कलामन्दिरसँग आबद्ध भए, स्व. शिव रेग्मीकै निर्देशनमा बनेको ‘स्वदेशभित्र हराएको नागरिक’, ‘माटो बोल्दैन’, ‘नेपाली खोइ ?’जस्ता सशक्त नाटकमा मुख्य भूमिकामा देखिएपछि उनको चर्चा चुलियो । त्यसपछि चलचित्रमा पनि उनको माग हुन थाल्यो ।
श्रेष्ठ भन्छन्– ‘तर पनि अलि समय दिन नसकेर र सुटिङ भएको स्थान टाढा रहेको हुँदा म गइनँ ।’ तर, चितवनमा नै सुटिङ हुन थालेपछि भने उनले भकाभक चलचित्रमा आफूलाई र आफ्नो अभिनयलाई देखाउन पछि परेनन् । २०४९ सालमा ‘रक्षा’ र ‘कसम’ चलचित्रमा आफूलाई पहिलोपटक उभ्याएपछि उनले त्यसपछि ‘हामी तीन भाइ’, ‘मनले मनलाई छुन्छ’, ‘मुगलान’, ‘युद्ध’, ‘मानिस’, ‘बडीगार्ड’ आदि गरी डेढ दर्जन चलचित्रमा आफ्नो अभिनय खरो रुपमा देखाएका श्रेष्ठ चितवन आमाकै एक असल सुपुत्र हुन् भन्दा फरक नपर्ला ।
त्यतिमात्र नभई उनले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘५२ घुस्सा ५३ ठक्कर’, ‘अपराजिता’जस्ता टेलिचलचित्रबाट तालुखुइले हाकिमको रुपमा चिनिए । चितवनकै लोकल च्यानलमा प्रसारण हुने ‘अल्छीको सपना’मा पनि उनले केही खोट छोडेनन् । हाल नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारणमा आउन लागेको ‘परिणाम’मा पनि उनी मुख्य भूमिकामा रहेका छन् । ‘यस टेलिचलचित्रबाट झन् मेरो उचाइ बढ्नेछ’, उनी भन्छन् ।
हाल उनी चितवनकै लोकल टेलिभिजनका लागि ‘छोरीबुहारी’ र ‘चितवन चकलेट’मा काम गरिरहेका छन् । त्यसलगत्तै उनी विकास आचार्यको निर्माण र मुस्कान ढकालको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र ‘नाइँ नभन्नू ल–३’ का लागिसमेत अनुबन्धित भइसकेका छन् । पुष्प आचार्यको लेखन र सञ्जयबाबु ढकालको निर्माण रहने ‘वीर गोर्खाली’मा कुरा भइरहेको उनी बताउँछन् ।
२०५४ सालमा स्याङ्जाकी कल्पना श्रेष्ठसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका श्रेष्ठको पल्लवी र प्रज्ज्वल गरी १ छोरा र १ छोरी छन् ।
‘नेपाली सिने क्षेत्र सानो रहेको र राम्रा–राम्रा प्रतिभा आर्थिक कमजोरीका कारणले अगाडि आउन नसकेको अवस्था छ । पैसा भएका तथा अभिनय र कला नबुझी आउने यहाँ धेरै छन् । त्यसैले गर्दा नेपाली चलचित्र कमजोर भएको हो । राम्रा कलाकारको चलचित्र त चलिरहेकै छ नि । राम्रा कलाकारलाई र लुकेका कलाकारलाई अगाडि ल्याएर उनीहरुको सीपको सदुपयोग राज्यले गर्न सक्नुपर्दछ’, श्रेष्ठ भन्दछन् ।
राष्ट्रले कलाकारलाई गहना मानेको छ तर कलाकार कस्तो गहना हो, कलाकारहरुको काम र उनीहरुको अभिनय हेरेर उचित मूल्याङ्कन राष्ट्रले गर्नुपर्ने र कलाकारको सम्मान गर्नुपर्ने उनी भन्दछन् । अहिले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा लगिए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सम्पूर्ण पक्षले कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कलाकारिता पेसाले परिवार पाल्न मुस्किल छ, कतिले त काम लगाउने अनि पैसा नदिने चलन पनि छ । यस्ता कलाकारहरुको पसिना चुस्नेहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्दछ । कलाकारको पारिश्रमिक पनि निश्चित हुनुपर्ने र राम्रा–राम्रा प्रतिभालाई अगाडि ल्याउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
हालै नारायणी कलामन्दिरमा देखाइएको ‘सकस’ नाटकमा जेठाको भूमिकामा देखिएका उनको अभिनयले सबैलाई रूवाएको थियो । यस नाटकको निर्देशन पुष्प आचार्यले गरेका हुन् भने श्रेष्ठ सहनिर्देशक रहेका थिए ।
परिस्थितिले रचेको इतिहास :कोहिनूर
विनोदबाबु रिजाल, ,चितवन
अभिषेक खरेल ‘बाबु’ उर्फ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ मध्यम परिवारका शिक्षित युवक हो । पढाइ सकेरपनि उसको जागिर छैन । काम जे गर्नपनि सक्छ । अवसर छैन । समाजका अनेक विकृतिमध्ये मानव तस्करीमा संलग्न सञ्जालले मूल सडकमै प्रहरी इन्सपेक्टरको हत्या गर्छ । प्रत्यक्षदर्शी अभिषेक र उनका साथीहरु हत्याराको पिछा गरी नियन्त्रणमा लिन्छन् ।
मानव तस्करीका जालोले राजनीतिक नेता, प्रहरीदेखि पत्रकारसम्मलाई जेलेको हुन्छ । तिनले मेनपावरमार्फत इजरायल पठाउने भनेर भारतको मुम्बई पु¥याई नेपाली नारी बेच्छन् ‘कोठी’मा । अदृश्यरुपमा यसमा राज्यका निकायहरुको संलग्नता हुन्छ । देशमा कहलिएका नेता ‘साधुराम’ उर्फ मुकुन्द श्रेष्ठ मानव तस्करीका मुख्य नाइके हुन्छन् । उनको अण्डरमा काठमाडौंका जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसएसपी सम्राट सापकोटा तस्करीलाई नै बढावा दिन्छन् । साधुरामको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिदैन । तर, अदृश्यरुपमा मुख्य चालक उनी नै हुन्छन् । अभिषेकले आफ्नोविरुद्ध अभियान चलाउने डरले साधुरामले चाल खेल्छ । जागिरको आवश्यकता खड्किएका अभिषेकलाई कुशल नेता कहलिएका साधुरामले जागिर लगाइदिन्छ । उनको काम हुन्छ, इजरायल जाने नेपाली युवतीलाई भारतको मुम्बइसम्म पु¥याउने । जागिर दिएर साधुराम अभिषेकलाई फसाउन खोज्छन् । अभिषेक त्यसलाई बुझ्दैनन् ।
मुम्बइ पुगेपछि उनी यस्तो कोठीमा पुग्छन्, जहाँ कोहिनूर (स्वेता खड्का) लगायत नेपाली महिला नरकीय जीवन बिताइरहेका हुन्छन् । जब उनले आफैले लगेका युवतीहरु पनि मुम्बइमा बेचिएको भेट्छन् अनि बल्लन थाहा पाउँछन् जागिरको नाममा मानव तस्करले आफूलाई पनि तस्करीको मतियार बनाइरहेको । मुम्बइका मनकारी प्रहरी इन्सपेक्टर राठौरको सहयोगमा उनले कोहिनूरलगायत सबै नेपाली युवतीलाई नरकीय कोठीबाट भगाउन सफल हुन्छन् ।
तर, राजनीतिक शक्तिको आडमा अभिषेकमाथि अन्याय गरिन्छ । नेपाल र भारत प्रहरीमा उनीमाथि मानव तस्करको उजुरी हालिन्छ । बेचिएर नेपाल फर्केकी युवतीको हत्या गरेर साधुरामकै सञ्जालले अभिषेकलाई नै हत्यारा आरोप लगाउँछ । कोहिनूरलाई पनि ‘तिमीलाई बेच्ने यही हो’ भनेर अभिषेकप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकास गराउँछ । कोहिनूरले पनि आफूलाई बेच्ने व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिन्छिन् । त्यतिमात्रै होइन, भारत फोन गरेर अभिषेकलाई मार्न खटाउँछिन् । मारें भन्ने खबर पनि आउँछ । तर, मर्ने अभिषेक नभएर अरु कोही हुन्छ । घरमा भने अभिषेक मरेको खबर कोहिनूरले नै पु¥याउँछिन् । मुम्बइ प्रहरीकै सहयोगमा अभिषेक घर फर्किन्छ ।
नेपालमा तीव्र खोजीमा रहेका अभिषेकलाई साधुराम आफैले मार्न मान्छे खटाउँछन्, तैपनि बाँच्छन् । प्रहरीकै गलत एसएसपीले उनलाई खोज्छ, कोहिनूरलाई मार्न खोज्छ सफल हुँदैन । मरेको खबर पाएका बाआमा एक्कासी घर पुग्दा अचम्मित हुन्छन् । कोहिनूरलाई अभिषेकले सबै कुरा भन्छन् । अनि उनीहरु मानव तस्करीको जालो तोडिछाड्ने प्रणका साथ काम गर्छन् । उनीहरुको योजनाले काम गर्छ । अभिषेक निर्दोष र साधुरमको सञ्जाल दोषी भएको प्रमाणित गर्न सफल हुन्छन् उनीहरु । अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको नेपाली चलचित्र ‘कोहिनूर’ ले समेटेको कथा हो यो । नेपाली चेली भारतीय कोठीमा बेचिएको कथा नेपाली चलचित्रहरुमा यसअघिपनि नउठाइएका होइनन् । तर, कोहिनूरमा उठाइएको यो कथाले बहुसंख्यक नेपालीलाई हलसम्म तानिरहेको छ ।
श्रीकृष्णको होम प्रोडक्सन ‘कहाँ भेटिएला’ हिट भएपछि आएको कोहिनूरपनि चल्ने आँकलन धेरैले गरेका थिए । तर, यत्तिको होइन । “चल्छ भनेर हामीले पहिले नै अनुमान लगाएका थियौं”, निर्देशक आकास अधिकारीले एक प्रसंगमा भनेका थिए, “तर, दर्शकको बाढी यति नै आउँला भनेर चाही होइन ।”
भदौ ७ गते कोहिनूर चलेको तेस्रो शनिबार हो । पहिलो र दोस्रो शनिबारजस्तै भीड तेस्रोमा पनि भयो । ठेमलठेल, मारामार उस्तै भयो । हलमा बाल्कोनीको टिकट काटेर स्पेशलमा उभिएर हेर्नेहरु उत्तिकै भए । शनिबार नारायणगढको इन्द्रदेव चलचित्र मन्दिरमा दर्शकको भीड हेर्नेले सजिलै भन्न सक्छ कि यो चलचित्र अझै केही हप्ता चल्नेवाला छ । “भदौ महिनाभर चल्न सक्छ”, हल सञ्चालक मुक्तिलाल पियाले भने, “नेपाली चलचित्रलाई यति धेरै माया गरेको पाएको थिइनँ ।” उनले लामो समय चलेका चलचित्रका दर्शक संख्याभन्दा १६ दिनसम्ममै कोहिनूरकै बढी भइसकेको जनाए । हुनपनि उनको हल छिर्न दर्शकको मारामार यो शनिबारपनि उस्तै रह्यो । “दोस्रो शनिबार थामिनसक्नु भयो”, उनले भने, “त्यसपछि तेस्रँे शनिबारले दुःख दियो ।” हल छिर्नेको घुइँचोले कैयौं चेपाचेपमा परे । कैयौंले चपल छोडेर सिट ओगटे । दर्शक सकिएपछि हल परिसरमा असरल्ल चपल थिए ।
बिहानको ‘शो’ एकघण्टा अघि नै प्याक भयो । दर्शकको चाप बढी भएर ९ बजे शुरु हुनुपर्ने फिल्म २० मिनेटअघि नै लगाइयो । १२ बजे र ३ बजेका शोपनि उस्तै रहे । श्रीकृष्णले कैयौं हिट फिल्म दिए । तर, कोहिनूरले नै नेपाली चललिचत्रका सबै रेकर्ड किन तोड्यो त ? के यो फिल्मले नेपाली फिल्मले अहिलेसम्म देखाउन नसकेको दृश्य देखायो ? के यसले समेटेको कथा अहिलेसम्मकै नयाँ हो त ? के यसमा मान्छेलाई मोहनी लगाउन सक्ने त्यस्तो प्रस्तुति छ ? होइन, चलचित्र फर्मुलामै छ । बेलाबेलामा आउने फाइट, गीत समान ग्यापमै छन् । आमाले गर्ने छोरामाथिको माया, नायकले पछार्ने दशौं जना खलनायकहरु उस्तै छन् । शम्भुजित बास्कोटाको संगीत उस्तै नै छन् । होला यो चलचित्रले औसत चलचित्र भन्दा बढी व्यापार गर्ने ल्याकत राख्ला । तर, मूलरुपमा दर्शकको बाढी आउनुको कारण भनेको श्रीकृष्णप्रतिको माया नै हो ।
नेपाली चलचित्रमा नकारात्मक चर्चाबाट टाढा रहेका श्रीको मृत्यु यस्तो समयमा भयो कि जुनबेला उनी तीव्र चर्चामा थिए । त्योपनि उनको मृत्यु यति असामयिक, अपर्झट र स्वीकार गर्न नसकिने गरी भयो कि उनी हनिमूनमै थिए । बिहे गरेको केही समयमै उनको असामयिक देहान्तले नेपाली समाज नराम्ररी स्तब्ध भए । चलचित्र रिलिज भएलगत्तै बितेका श्रीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने सबैभन्दा ठूलो साधन हलमा गएर उनको फिल्म हेर्नुबाहेक अरु हुनै सक्थेन । उनीप्रति श्रद्धा गर्ने आमनेपाली हलसम्म धाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नकै लागि कोहिनूर हेरेका हुन् । होइन भने कुनैपनि हालतमा नेपाली चलचित्रको बजार अहिलेको अवस्थामा ५ करोड कट्नेखालको छदै छैन । कहिल्यै हल पुगेर चलचित्र नहेर्नेले पनि कोहिनूर हेरेका छन् । वर्षौपछि हल गइयो भन्नेहरु कैयौं छन् । यो सबै श्रीकृष्णप्रतिको श्रद्धा, माया र सद्भावले गर्दा नै भएको हो । नेपाली चलचित्रमा न यस्तो कहिल्यै देखिएको थियो, न त आगामी दिनमै हुनेछ । कामना गरौं कोहिनूरले ५१ दिनपनि मनाउनेछ ।
केहि दिनयता एउटा तिजको गीतलाई लिएर गरिएको बहस र रमिता हेर्दा लाग्दैछ, सम्पूर्ण दलित आन्दोलन यसैमा केन्द्रीत छ। अनि केहि दलित संघसंसथाको गतिविधि देख्दा यस्तो लाग्यो कि अब आन्दोलन र डलरको उपलब्धी तत्काल मिल्दैछ।
राजेश हमला बिना मधु एक्लै तडपिदै । मधुले हमलासगको तो पलको फोटो हेरेर चित्त बुजाऊदै
जेठ १० गते विवाह बन्धनमा बाधिएका महानायक राजेश हमाल यति बेला देश बाहिर रहनु भएको छ । बिहे लगतै कार्यक्रमका शिलशिलामा अष्ट्रेलिया भ्रमणमा निस्केका हमाल अहिले सिंगापुरमा रहेका छन् ।यति बेला आफ्नो नया बेहुलीलाई नेपाल छोडेर विदेश तिर निस्केका महानायककी श्रीमती मधु भट्टाराईले आफ्नो श्रीमान राजेश हमाललाई भने खुब मिस गरेकी छिन् ।
बिहे गरेका नया बेहुला बेहुली हनिमुनको लागि सगै कतै घुम्न जान्छ तर हाम्रा महानायकले नया बेहुलीलाई नेपालमा एक्लै छोडेर विदेश लागे पछि यहाँ मधु भने हरेल पल हमाललाई सम्झेर उनकै फोटो हेरेर चित्त बुजाऊदै उनि आउने दिन कुरेर बसेकी छिन् ।अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेका हमाल असार ८ गते भित्र नेपाल फर्किसक्ने कार्यक्रम छ । यहाँ मधु भने सामाजिक संजाल फेसबुकको पेज मार्फत हमाल सगको तो पल जस्त सी भन्दै हरेक दिन जस्तो हमाल र उनको फोटो हाल्दै हमाल बिना उनको एक्लो महसुस र उनलाई भेट्ने कति तडपेकि छिन् भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ ।
अब छिट्टै नै महानायक राजेश हमाल नेपाल आएर असार १० देखि १३ गते सम्म हमालले श्रीमती मधुका साथ पोखराका रमणीय स्थलहरुमा हनिमुन मनाउना जाने कार्यक्रम रहेको बुज्न आएकोले अब मधुको यसरि हमाल बिना तड्पेर बस्ने दिन सकिने लागेको छ कार्यक्रम।यसैगरी पोखराको हनिमुन भ्रमण लगत्तै मधुलाई लिएर हमाल अमेरिका उड्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
निर्देशक दयाराम दाहालका भाई कमल दाहालले निर्देशन गरेको चलचित्र झेलीबाट रजतपटमा डेब्यू गरेकी हुन नायिका सुरबिना कार्कीले । अहिले उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा “हट केक” नायिकाको नामबाट समेत परिचित बन्न पुगेकी छिन । ठूला पर्दामा प्रवेश गर्नु पुर्व उहाँले २५ भन्दा बढी म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी थिइन । हँसिली फरासिली सुरबिना ग्ल्यामर्समा दुनियाँमा आफु उदार रहेको बताउँछिन ।
“ग्ल्यामर्स बिनाको चलचित्रको कुनै अर्थ नै हुन्दैन, समाजले पचाउन सक्ने, हाम्रो संस्कृतिलाई आघात नपर्ने किसिमको ग्ल्यामर्स दिन कहिल्यै नहिच्चकिचाउने पनि बताउनु भएको छ । चलचित्रमा ग्ल्यामर्स आवश्यक भए पनि केहि नायिकाहरुको भलगर प्रस्तुतीले ग्ल्यामर्स शब्दकै अपमान भएको पनि बताउनु भएको छ । घर परिवारकै माया काफी रहेको र आफु भरखर विस बसन्तमा प्रवेश गर्दै गरेको कारण कसैको प्रेममा फस्ने समय नरहेको प्रष्ट पार्नु भयो । विवाह अघिको सेक्स दुर्घटना भएको कारण किशोरीहरुमा देखा पर्ने यौन समस्याहरुको ज्ञान प्राप्त गर्न र विवाह अघिको यौन सम्पर्कबाट हुने दुषपरिणामको बारेमा सचेत रहन भने यौन शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु हुन्छ । चलचित्रमा अभिनय गर्ने क्षमता र खुबी दुबै प्रति आत्म विश्वास रहेकोले भविष्यमा समेत यसै क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने चाहना उहाँमा रहेको छ ।
पहिलो चलचित्रबाट निकैनै चर्चा बटुल्न सक्नु भएकी नायिका अहिले चलचित्र “कात्र्तिक” र “नाइके”को अभिनयमा ब्यस्त रहनु भइरहेको छ । चलचित्र झेलीमा उहाँले बोल्नु भएका संवाद “सेक्सी बुढा, पानी त सित्तैमा आउँदैन, कार्यक्रम ।” साह्रै नै चर्चामा रहेको थियो । आफुलाई मन पराउने र प्रेमको प्रस्ताव राख्नेहरु धेरै भएता पनि अहिले सम्म कसैलाई ओके भने नभन्नु भएको पनि कुराकानीको क्रममा बताउनु भयो । यौनको बारेमा साथीभाइहरु सँग खुलेर कुराकानी गरेता पनि सेक्स स्याण्डलमा फस्नु चलचित्रकर्मीहरुको लागि पट्टकै राम्रो काम भने होइन । आगामी चलचित्रहरुबाट दर्शहरुलाई भरपुर मनोरञ्जन दिने बाचा गर्नु हुँदै आफुद्धारा अभिति चलचित्रहरु हेरिदिनुृ हुन समेत दर्शकहरुमा अनुरोध गर्नु भएको छ नायिका सुरबिना कार्कीले ।
मेरो त्यो अनुभव प्रति मैले आज मिठो अनुभूति गरें ।
२०५० सालको एक समय, मैले अनायाशै यस्तो अवसर प्राप्त गरें र पाएँ जुन त्यती बेला खासै त्यस्तो केहि महत्व राख्न सकेन त्यो अवसरले । तर आज मेरो बिगतको त्यो क्षणबाट भने केहि सुखानुभूति गर्ने अवसर प्राप्त गरें । मलाई त्यो दिन सम्झदा आज साच्चीकै अनौठौ खुशीको अनुभुति भइरहेको छ । तसर्थ मेरो त्यो अवसरको प्रशिक्षक श्रद्धय गुरु तथा नाटककार अशेष मल्ल प्रति मैले आज कृतज्ञ हुने अवसर प्राप्त गरेको ठानेको छु ।
मैले त्यस समयमा खास गरी दक्षिण एशियामा नै समाजिक चेतनाको सशक्त माध्यमको रुपमा सडक नाटकलाई अंगिकार गर्दै अगाडि बढीरहनु भएका श्रद्धय साहित्यकार, नाट्यकार, निर्देशक, शिक्षक, प्रशिक्षक आदरणीय अशेष मल्लको नामको चर्चा परिचर्चा बहुत सुनेको थिए । त्यस्ता ब्यक्तिबाट मैले त्यस समय छोटो समयको लागि भएतापनि प्रत्यक्ष अभिनयको प्रशिक्षण लिने अवसर प्राप्त गरेको थिए । अभिनयको प्रशिक्षण कै क्रममा उहाँबाट अभिनयका थोरै तिता मिठा अनुभव र अनुभूतिका कुराहरु पनि सुन्ने अवसर पाएको थिएँ । प्रशिक्षित समकालिन साथीहरु सँग २०÷२२ पटकको सडक नाटकमा अभिनय पनि प्रस्तुत गरें । त्यसको अलवा केहि स्टेज नाटकहरु समेत प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको थिएँ । त्यस समय ती कुराहरुले मलाई खासै अर्थ राख्न सकेन र त्यो क्षणहरुको कहिल्यै स्मरण अनि घच्चघचाउनु समेत सकेको थिएन ।
तर त्यही कुराले आज करिब २० वर्षको समय पश्चात भने सार्थकका साथै मिठो अनुभूति र स्मरण गर्ने अवसर पाएको छु । जति बेला म नेपाली समाजिक चलचित्र “ठूली”को लागि आजका “सुपर नायक” तथा नेपालको पहिलो “मिस्टर नेपाल–२००२” बन्न सफल सुपर नायक जीवन लुईटेलको साथमा अभिनयको क्रममा पाएँ । उहाँसँगको अभिनयको क्रममा एक थप्पडको साथमा मैले आफुलाई हास्यरुपमा अभिनय प्रस्तुत गर्दै छोटो संवाद बोल्दै थिएँ । म आफ्नो अभिनयमा हराउँदै थिए । अचानक निर्देशक सुरेन्द्र बिक्रम शाहबाट “कट्”को ध्वनी मेरो कानमा प¥यो । म झस्कीएँ फेरी पनि मैले क्यामेराको भाषा बुझिन की ? तर मैले तुरुन्त पत्तो पाएँ की मेरो गल्ति त त्यो बन्न पुगेछ, मेरो संवाद सहितको अभिनयको साथसाथमा सुपर नायक मस्त हाँसोमा डुब्नु भएछ । उपस्थित दर्शक, अभिनयमा संलग्न सुपर नायक जीवन लुईटेल तथा प्राविधकहरु समेत हाँसोमा लट्ठ डुबेको देख्दा मलाई यस्तो सुखानुभूति भयो की मैले एक पटक झस्याङ् भई श्रद्धय गुरु अशेष मल्ल सरलाई सम्झन पुगेँ ।
अनि मैले समकालिन मेरा नाट्यकर्मी साथीहरु श्रृङखला नाट्य समुह, मकवानपुरका स्व.श्रीराम थापा, मुरारी रैला, वासु न्यौपाने, कुमार शाह, लक्ष्मी न्यौपाने लगायतका लाई एक पटक मेरो मानषपटलमा ल्याउने प्रयास गरें । मेरो मरिसकेको त्यो विगतको कल्पना पुनः एक पटक ब्यूँतिएको अनुभूति समेत गरें । जे होस्, यो मेरो अविस्मरणीय अभिनयको क्षणबाट चलचित्रका दर्शकहरुलाई मैले हसाउँन सकौला या नसकौँला त्यो नेपथ्यका कुरा भए, तर अवश्य पनि मेरो अभिनयको कारण सुटिङ् स्थलमा लामो सयम सम्म छुटेको हासोँको पर्राले मैले मेरो दूई दशक अगाडिको प्राप्त गरेको अभिनय प्रशिक्षणका साथै सडक नाटकको त्यो अनुभवलाई भने ठूलै लाभको रुपमा अवसर प्राप्त गरेको मिठो अुनुभूति गर्न भने पाएको छु । अवसर दिने तथा सहयोगी अनि उत्साह बढाइदिने सम्पुर्णलाई मुरी मुरी धन्यवाद
जीवनमा उत्साह जनक “कदम” चाल्दै छिन साहित्यकार जया ओझा ।
सबैको बाँच्ने एउटा जीन्दगी नै हो । तापनि बाँच्ने क्रममा धेरै उकाली ओराली अनि बाङ्गो टिङ्गा गोरेटो, दोबाटो चौतारी, भञ्ज्याङ्ग, नदी नाला, भेल, बाढी पहिरो सबैसँग सामना गर्नु पर्दछ । यस्ता जीवन संघर्षका अनन्त यात्रामा सबै मानवहरु उर्जाशिल रहि रहँदैन । जीवन यात्रामा उत्साहजनक पाइलाहरु त उसले बढाउछ, जसले सफलता चुम्ने दृढता मन भरी–भरी साँचेका हुन्छन । अनि आफ्ना हरेक उत्साहका पाइलाहरु होसीयारी र नलखराई लम्काउने साहस गर्दछन । यी यस्तै धेरै मानिसहरुको भिडमा देखा पर्दैछिन, लेखीका जया ओझा ।
६० सालमा अध्ययनको सिलसिलामा नुवाकोटको त्रिशुलीबाट राजधानी काठमाण्डौं आउनु भएको हो उहाँ । उहाँ राजधानी शहरको साक्षात्कारको रहर र अध्ययनको लहडले मात्र समस्या नै समस्याको डंग्गुर राजधानीमा आउनु भएको भने होइन । उहाँसँग कहिल्यै नऔलिने संकल्प थियो । कसैले झट्टारो हान्दैमा नझर्ने दृढता थियो । अनि “कदम” बढाउने अदम्य साहस थियो । त्यसैले त उहाँ जस्तो शिष्ट, शालीनता भएको हाम्रै परम्परागत र रुढीग्रस्त समाजकी नेपाली नारीको पाइला आज सम्म डगमगाएको छैन । जीवनको असन्तुलित जोड घटाउलाई सन्तुलित गर्दै हातमा लाग्न सकेको केहि सफलताबाट अझै उर्जाशिल बन्दै पुर्णरुपमा फक्रिने प्रयासमा हुनु हुन्छ साहित्यकार जया ।
छलकपट, लोभ, पापको भिडका भिड भएको हाम्रो समाजमा पनि एउटी नारी पात्र हुँदै सवल ढंगले गीतको सृजना गर्नु हुन्छ । जानी नजानी कसैको अल्झेलोले उहाँको उत्साहलाई मार्न सकेका सक्दैन । त्यसैले त कपीको हरफ हरफहरुमा निरन्तर बढाउनु सक्नु हुन्छ सुन्दर अक्षरका थुप्राहरु । अक्षर अक्षर सजाएर सुन्दर माला बनाउनु हुन्छ । हो त्यस्तै गर्नु भएको छ उहाँले । जस्तो स्वभाव, उस्तै ब्यवहार र प्रस्तुती छ उहाँको । उहाँले जीवनका अनुभव र अनुभूतिहरुलाई मन भित्र भित्रै औल्याउन दिनु भएको छैन । बरु त्यसलाई कथा, पटकथा र संवाद बनाउँदै चलचित्रको माध्यमबाट हामी बिच बाँडन सक्नु भएको छ । कति साहसी हुन्दैछन नेपाली नारीहरु पनि । कसैको लोभलाभमा फस्न पर्दैन आत्मविश्वास, दृढता र साहस भइकी नेपाली नारीहरुलाई पनि । ति नारीहरु मध्येकी मेरो नजरको उहाँ पनि एक पात्र बन्न सक्नु भएको छ । त्यसैले पनि म उहाँलाई आदर स्वरुप दशऔंला जोडदै एक पटक हृदय देखिको प्रणाम गर्न चाहन्छु । अझ उहाँको ती उमङ्ग, उत्साह र दृढताहरुको अगाडि मेरो टुटेफुटेका शब्दहरु समर्पण गर्न चाहन्छु ।
उहाँले २०६३ सालमा आफ्नै रचनाहरुमा “कदम” एलबम गीती संगालो लिएर नलखराउने कदमहरु बढाउन प्रारम्भ गर्नु भएको थियो । त्यही वर्ष राजेश शाहीद्धारा निर्माण र प्रदिप श्रेष्ठको निर्देशन रहेको चलचित्र “कवज”को लागि स्क्रिप्ट लेख्नु भएको थियो । सहीत्यकार पारीजातको शिरिषको फूल उपन्यासलाई जापानिज भाषा सहित चलचित्रमा उतारी सक्नु भएका जापानिज निर्माता निर्देशक डा. तोसी आकी इत्योको निर्देशनमा “माई लभ”को छायाँकन कार्य समाप्त भइसकेको छ । रन्जित रानाका निर्देशनमा निर्माणहुन गइरहेको चलचित्रका लागि सिक्रिप्ट सकाइ सक्नु भएको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण भइसकेको ३० भागको “परिबन्ध” टेली सिरियलको कथा, पटकथा संवाद उहाँ कै थियो । त्यसो त प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा प्रशारण हुने टेली चलचित्रका लागि समेत कथा, संवादहरु लेखी सक्नु भएको छ । चलचित्र “मेरो मनको साथी” “सडक” “तिमी मेरो म तिम्रो” “माइ लभ”का मिठा र मन छुने गीतहरु उहाँ कै सृजना हो । चलचित्रको लेखन र गीतहरुको सृजनामा बाहिरी प्रेरणा कसैबाट नपाईतापनि लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा र प्रयास भने सानै उमेर देखि थियो । भनिन्छ पिपलको बोट ढुङ्गाको कापैबाट पनि उम्रिन्छ, हुर्किन्छ, बढ्छ र धेरैलाई सितलता दिने गर्दछ । हो, वास्तवमा नारीको आत्म विश्वास र दृढताका कदमहरु सफलता तर्फ उन्मुख हुन सक्छ भन्ने उजागर गरिदिनु भएको छ, साहित्यकार जयाले । तर्सथ अझ उत्साह छ उहाँ सँग । त्यसैले अहिले नेपाली विषयको स्नाकोत्तरको विशिष्टताको लागि लागिपरिरहनु भएको छ । साहित्यका विविध विद्यामा समेत कलम चलाइरहनु भएको छ । त्यतिले मात्र उहाँको मन भरिएको छैन । अझै असहाय, दिनदुखीहरुलाई कानुनी झैं झमेलाबाट निशुल्क उपचार ब्यवस्था गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने योजना सहित कानुन विषयको अध्ययनमा लागिपरिरहनु भएको छ । यसरी जीवन यात्रामा उत्साह जनक कदम चाल्दै हुनुहुन्छ साहित्यकार जया ओझा । हामी पनि उहाँ जस्तै शालिन, शिष्ट, आत्मविश्वासी, साहस र दृढताका साथमा आफ्नै ब्यक्तित्व विकास, समृद्ध समाजको जग बसाल्दै सम्मुनत राष्ट्र निर्माणका लागि लागि पर्ने हो की ?
(साहित्यकार जया ओझासँगको कुराकानीमा आधारित)
बर्ष २०७० मा सिनेमा बजार । ४ फिल्म हिट, १०० बढि फ्लप ।
सुसन धिमिरे, पोखरा ।
गतबर्ष जस्तै यो बर्ष पनि लगानी नउठाउने चलचित्रका सुचि निक्कै लामो रहेको छ । यो बर्ष चैतको दोस्रो साता सम्म झण्डै १ सय ८ चलचित्र हरु प्रर्दशनमा आएका छन् ।
ति मध्ये जम्मा चार वटाले मात्रै लगानि उठाएका छन् । बाँकी अरु सवैले घाटाको व्यापार गरे । पछिल्लो बैशाख महिना यता मात्रै सिनेमा उद्योगमा लगभग ८५ करोड लगानी भएको अनुमान छ । लगातार चलचित्रको असफलताले व्यवसायीक रुपमा लगानी गर्नेलाई निराश पारेको छ साथै चलचित्रकर्मीको पेशा नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । केहि अघिसम्म पुरानै कथाबस्तु र निर्माण शैली भएकाले चलचित्रले हरु फल्प हुने गरेको तर्क गरिन्थ्यो । तर दुईतीन बर्षयता प्रविधि, अभिनय र कथामा निक्कै फड्को मरेको भएतापनि चलचित्र एक पछि अर्को गर्दै पनि डुवेका छन् ।
व्यवसायिक रुपमा सफल भएका लुट र चपली हाइटपछि पुरानो धार र शैलीलाइ छोडेर चलचित्र बन्दै आईरहेका छन् । तैपनि नाम चलेका अनि यो क्षेत्रमा पुराना , पाका र अनुभवि को छवि बनाएका धेरै चलचित्रकर्मीले बनाएका फिल्म हरु फ्लपको सूचिमा रहेका छन् ।
नेपाली फिल्मी पर्दामा एक महिनामा झण्डै दश भन्दा बढी चलचित्रहरु प्रर्दशनहुने गरेका छन् । यसरी संख्यात्मक रुपमा फिल्महरुको बृद्धि भइरहंदा रिलिज भएका सबैजसो चलचित्रहरु हलमा मुस्कीलै ले एक हप्था टिक्ने गरेका छन् भने केही सिनेमाहरु एक दिन पनि टिक्न सकेका छैनन् ।नेपाली फिल्म प्रेमी दर्शक हरुको मनोभाबना बिपरित चलचित्र बनेका कारण यस्तो अबस्था आएको बिश्लेषक हरु बताउंछन् ।
उसो त बर्ष ०६९ मा पनि नेपाली चलचित्रहरुले बजार तताउन सकेका भने थिएनन् ।
अघिल्लो बर्ष पनि यो हराहारीमा चलचित्रहरु फ्लप भएका थिए । तर नेपालमा न कुनै हिरो हिरोइनका कारण चलचित्र चल्छ न त प्रविधि र प्रयोगले । त्यसैले
पछिल्लो समयमा नेपालमा चलचित्रको संख्या बढेको त छनै संग संगै,लगानी डुवाउने र कहिल्यै नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा फर्केर नआउने निर्मार्ताको संख्या पनि ।
यो बर्ष अहिले सम्म आईपुग्दा मात्र ४ चलचित्रले मात्र लगानी उठाउन सफल भएका छन् । छ एकान छ , झोला , काली र होस्टेल । यो साता अर्थात् आगमी शुक्रबार बाट रिलिज हुन लागेको आधि बाटो र अन्तीम सातामा रिलिज हुन लागेका दुई चलचित्र नाई नभन्नु ल २ र मनले मनलाई छुन्छ को मिडिया हाइप हेर्दा यिन हरुले राम्रो व्यापार गर्ने देखीन्छ । समग्रमा यो बर्ष २०७० नेपाली चलचित्रका लागी शुभ नरहेता पनि यिनै चलचिलको व्यापारले यो र्षको सुखद् अन्त्य गर्ने देखीन्छ ।